I-WordPress: Ukubuyiselwa Kwezinhlekelele | Martech Zone
I-WordPress: Ukubuyiselwa Kwezinhlekelele
ULwesine, April 5, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Okokugcina izinsuku ezimbalwa Kade ngisebenza ngokufutheka ukuthola ibhulogi yomngani wami omuhle uPat Coyle. (Iholide lami liyaqhubeka nokuthakazelisa kakhudlwana - namuhla likhithika kancane… ngo-Ephreli! Kwenzekeni kuGlobal Warming?)
Ngifuna ukwabelana ngokwenzekile bese ngixoxa ngezindlela zokuzivikela engizithathile nokuthi zilungiswe kanjani.
A DNS iseva yaqhubeka ku-fritz. A DNS iseva ihumusha ithrafikhi engenayo iye egameni lesizinda bese liyithumela kabusha kuseva efanele. Ngalokhu okwenzekayo, empeleni kunqamule izindlela ezimbili zokuxhumana - igama lesizinda kusayithi kanye nesayithi kwi-database (i-database yakhe njengamanje isendaweni eyabiwe).
Ngicishe izinto ngokuhambisa ngokushesha ibhulogi yakhe iye kwenye iseva, ngingaqapheli ukuthi kunenkinga ye-DNS. Lokhu kungeza elinye izinga lobunzima. Amaphasiwedi ku-WordPress (nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi ze-database) abhalwe ngokuhlukile yiseva akuyo. Uma uhambisa isayithi kwenye iseva, usanda kukhubaza amandla akho okususa ukubethela lelo phasiwedi. Ngokujabulisayo, i-WordPress (esinye isici esihle) inesistimu yokutakula iphasiwedi lapho ungasetha kabusha iphasiwedi yakho ngesixhumanisi esiku-imeyili.
Nasi isenzo esisheshayo engisithathile:
Ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke, kufanele ngithi nginenkampani enhle yokubamba iwebhu eyenza izipele eziphelele. Angikaze ngibe nenkinga abangakwazanga ukuyilungisa ngokusebenzisa izipele. Ngizwile amaphupho amabi avela kwabanye abantu kumabhulogi abo nakumasayithi alahleka ngokuphelele. Angikwazi ukucabanga ukuthi kunjani ukudlula kulokho. (Bhalisela kokuphakelayo kwami ​​kwe-RSS futhi ungathola isigqebhezana sonyaka wamahhala nomsingathi wami).
Ngikwazile ukungena ngemvume ku-Web Server ngo FTP futhi ubuyise yomibili indawo futhi imininingwane. Esinye isici sephakheji yami yokubamba ukuthi ngikwazi ukuyifinyelela yonke i- I-VDS ngale kwewebhusayithi uqobo. I-MySQL igcina imininingwane kusikhombi sefayela (/ var / lib / mysql /). Ngikwazile ukulanda i-database ngokumane ngikopisha umkhombandlela wendawo. Khuluma ngesipele esihle! Akukho ukungenisa, akukho ukuthekelisa, akukho ubukhulu obukhulu bamafayela ukubhekana… ne-FTP nje.
Manje njengoba senginendawo ne-database yendawo, ngiphefumulele phezulu. Ukube bengimane ngime lapha futhi ngibekezele, inkinga ye-DNS ibizosebenza yona futhi uPat ubezosheshe asheshe. Ngiqinisekisile ukuthi i-Domain Name ibisakhomba kuma-Servers afanelekile wegama lami angisebenzisayo Whois.net. Uma ubheka isizinda sakho lapho, amaseva wamagama aphansi kakhulu kombiko.
Lokhu kungenze ngakholwa ukuthi isayithi kungenzeka ukuthi ligqekeziwe. Igama leseva belilungile kepha ikhasi ebelivela bekuyikhasi elithile elibi elibukeka njengogaxekile. Ngisebenzise indlela ye- Isengezo se-Live Headers kuFirefox ukuqinisekisa ukuthi empeleni angiqondiswa kabusha - ukugqekeza okujwayelekile okubonwa abantu abaningi. Isayithi belingaqondiswa kabusha. Bengingenza ukuxazulula inkinga okwengeziwe; kodwa-ke, ngafaka ithikithi losizi nomphathi wami ukuze ochwepheshe babo baqale ukuphenya.
Ukubuyisela isayithi lakho kwi-akhawunti ehlukile noma kumsingathi:
Bengingazange ngivuselele i-Pat kunguqulo yakamuva ye-WordPress 2.1, PHP, ne-MySQL okwamanje, ngakho-ke nginqume ukuthi asikho isikhathi esingcono kunesamanje! Ngisuse i-akhawunti yakhe yakudala futhi ngaqala i-akhawunti entsha. Ngiphinde ngafaka imininingwane yakhe ye-alias ye-imeyili futhi ngilayisha i-database, I-WordPress 2.1 nokuqukethwe kukaPat:
umkhombandlela wokulayisha okuqukethwe kwe-wp - kulapho kuhlala khona zonke izithombe zakho ezilayishiwe.
wp-content plugins directory - wonke ama-plugins akho (yenza lokhu okokugcina yize ungahle ube nezinkinga zenguqulo.
wp-content themes directory - isihloko sakho.
Ngiyethemba ekukhishweni kwesikhathi esizayo kweWordPress ukuthi lezi zinkomba ezi-3 ziyizikhombisi zezimpande kunokuba zibe yimikhombandlela engezansi. Kungenza ukuthuthuka kube lula kakhulu! Ngalesi sikhathi, umphathi wami wayesethole inkinga ye-DNS futhi waqondisa kabusha kahle isayithi. Hawu! Manje ikhasi likaPat lalizobuya ngomyalezo we-WordPress Upgrade. Ngichofoze ukuze ngithuthukise i-database futhi wayebuyiselwe emuva… cishe.
Uyayikhumbula inkinga yokubethela engikhulume ngayo? Yebo, uPat akakwazanga ukungena ngemvume ngenxa yakho. Iphasiwedi yakhe ayibange isalichaza inani ledatha ngokufanele ngakho-ke ngibe nokulungiswa okukodwa okufanele ngikwenze. Ngangena ngemvume ku-database futhi ngashintsha ikheli le-imeyili lokuphendula likaPat etafuleni lomsebenzisi laba ikheli lami le-imeyili. Ngibe sengisebenzisa isici esithi “Lost My Password” ukuzithumela nge-imeyili isixhumanisi sokusetha kabusha iphasiwedi. Ngemuva kokusetha kabusha iphasiwedi, ngangena futhi ngashintsha ikheli le-imeyili likaPat.
Futhi manje uPat ubuyile! Ukubheka emuva kungama-20/20… ukube bengimane ngilinde umphathi wami, inkinga beyizolungiswa. Ngayinkimbinkimbi impela inkinga. Kodwa-ke, uPat manje uthuthukile futhi usebenzisa izinhlobo ezinhle kakhulu zayo yonke into. Ngiyaxolisa ukuthi ubesehlale isikhathi eside, noma kunjalo. Akuthathi isikhathi eside ukubuyela emuva ngesikhathi sokuphumula, kepha ukuphazamiseka okubi! Uxolo, Pat!
Qiniseka ukuthi unomgcini ophethe izipele ezinhle.
Yenza isipele isiza sakho kanye ne-database yakho bese uwagcina endaweni ephephile.
Uma unomgcini omuhle, thembela kubo ukuthola nokulungisa inkinga.
Uma udinga, thuthela kumsingathi omusha noma i-akhawunti futhi uqonde ukuthi ungayibuyisa kanjani isayithi, i-database, futhi uthole iphasiwedi yakho.
Olunye ulwazi olwengeziwe
Namuhla ukufunwa kokuxhumeka kwe-inthanethi okusheshayo kuye kwanda ngokuphindaphindiwe. Impela, kuleli zwe elihambayo le-inthanethi, ifoni yesathelayithi kufakazele ukubaluleka kwayo. Uma kukhulunywa nge-inthanethi engenantambo, abantu basengozini futhi bayabuza i-internet engenantambo kanjani ebaluleke kakhulu kubo. Ikakhulukazi kubaphathi bewebhu ukubaluleka kwe- i-wireless DSL awusekho umbuzo. Kakhulu labaphathi bewebhu bayathanda isitudiyo sokwakhiwa kwewebhu ukuklama bese udinga lolu xhumo lwejubane elikhulu ukulilayisha. Njengesinyathelo esilandelayo lolu xhumo olusheshayo luyadingeka kwinqubo ye- ukumaketha kwenjini. Umuntu one Isitifiketi seMicrosoft ingaphatha kalula zonke izinkinga ekuxhumaneni nalezi zixhumanisi.
Tags: ukuvuselelwa kwenhlekelele ye-wordpress
I-Kiss Theory Good Bye: Imikhuba Emihlanu Yokukhubazeka Yezinkampani
Imingcele ibukhoma ngo-01: Imingcele ngokukhangisa nge-imeyili ye-Amazon